eSancharpati | सर्वोच्चको फैसलापछि संसदमा चार दल, कसको सिट कति ? - eSancharpati सर्वोच्चको फैसलापछि संसदमा चार दल, कसको सिट कति ? - eSancharpati
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण खारेजीको निर्णय गरेसँगै संसदमा चारवटा दल भएका छन्।
सर्वोच्चले नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा ऋषी कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ ।
यससँगै संसदमा अब नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गरि चारवटा पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा एमालेको प्रत्यक्ष तर्फ ८० सिट र समानुपातिक तर्फको ४१ सिट गरि कूल १ सय २१ सिट थियो। सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले हाल एमालेको १२० सिट छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट हात पारेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा ४० हात पारेको थियो । तर, कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो। जसमध्ये प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेका छन् ।
जसपाको एकीकरण पछि उसका ३४ सांसद रहेका छन्। एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद थिए । जसपाका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन्।
संसदमा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन् । संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १–१ सांसद छन् भने १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।